AKHRISO-Qodobada ay Ku Heshiiyeen Dowladda Soomaaliya iyo Sh Mukhtaar Roobow
Shalay waxaa magaaladda muqdisho ka furmay wada-hadal u dhaxeeyay Dowladda Federaalka Soomaliya iyo Shiikh Mutqaar Roobow Cali(Abuu Mansuur) ku-xigeenkii Hogaamiyihii Al-shabaab waxaa la xaqiijiyay in wada-hadalkaas uu mel fiican kusoo dhamaaday.
Dhanka Dowladda Soomaliya waxaa wada-hadalka u matalayay Raisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaliya Xasan Cali Kheyre waxaa la sheegay in qodoboda qaar la isku fahmi waayay kuwaasi oo la sheegay in ay yihiin kuwa aan sidaas u muhiin aheyn.
Heshiiska ay gaareen Mutqaar Roobow Cali(Abuu Mansuur) iyo Dowladda Soomaliya ayaa waxaa ka harsan oo kaliyah dhaqan galkiisa in uu saxiixo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya Maxamed C/laahi Maxamed(Farmaajo).
Dhinaca kale Abuu Mansuur Roobow ayaa kasoo kacay qaliin dhinaca Kelida todobaad Ka hor lagu sameeyey waxaa Laga soo saarey Laba dhagax hadana caafimaadkiisu uu yahay mid aad u wanaagsan, waxaa uu maalmaha soo Socdo Uu ku wajahanyay Magaalada Xudur Ee Gobolka Bakool ee Koonfurta dalka Soomaliya.
Roobow ayaa latashi lasoo sameyn doona lataliyaaahiisa Sida aan xogta ku helay kadibna waxaa bilaaban doona Wadadii Lagu heshiiyay sidii lagu fulinlahaa oo ah In Dowladu ay dagaalyahanada Xarakada Al Shabaab Ka saarto bartamaha Iyo Koonfurta dalka Soomaalia.